MKV ka ISO - Olee otú iji tọghata MKV ka ISO (Windows 8 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata MKV ka ISO (Windows 10 gụnyere)
MKV bụ elu multimedia akpa usoro maka HD videos. Ugbu a, MKV bụ karị na kọmputa karịa Player, ruru ya elu definition na ikenyeneke mbiet video mma. Ọtụtụ ndị ga-amasị iji tọghata MKV video wee gbaa ya onye na ISO oyiyi faịlụ. Ebe a anyị nwere ike ikwu a MKV ka ISO Ntụgharị n'ihi na ị na ya mere na (Windows 10 gụnyere).
Wondershare DVD Creator Bụ a zuru okè MKV ka ISO Ntụgharị-enyere gị aka tọghata MKV faịlụ ka ISO mfe. E wezụga na, ọ na-enye ọtụtụ ọmarịcha free DVD menus n'ihi na mma DVD authoring na wuru na-nchịkọta akụkọ na-enyere gị dezie videos ka retouch ha kama! Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, biko jiri DVD Creator for Mac ike ISO si MKV (Snow agụ owuru, odum, Mountain odum gụnyere). Nzọụkwụ iji tọghata MKV faịlụ ka ISO na Mac na PC bụ otu. Na-esonụ ndu, anyị na-Win version maka ihe atụ.
Free download MKV ka ISO Ntụgharị isure ISO si MKV video faịlụ:
Olee otú iji tọghata MKV ka ISO nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu MKV video faịlụ ka usoro ihe omume
Tinye videos ka DVD Creator site na ịpị "Import" na-agagharị faịlụ site na kọmputa gị. Kwukwara videos ga-egosipụta na ekpe window na thumbnails. Ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe ịgbanwe video iji na hazie DVD utu aha.
Nzọụkwụ 2. Dezie MKV videos
Nke a MKV ka ISO burner enye ụfọdụ isi video edezi ọrụ dị ka ịkpụ, ewepụtụ, bugharia, akuku, ma tinye watermarks wdg ime ya, nanị pịa edit button n'akuku video, ma ọ bụ mata a video & nri pịa ya, na mgbe họrọ "Dezie" na-emeghe video edezi window.
Nzọụkwụ 3. hazie gị DVD menus
Họrọ si wuru na-free DVD menu ndebiri ma hazie menu site na-agbanwe buttons, okpokolo agba, ndabere, thumbnails, wdg
Nzọụkwụ 4. Preview na tọghata MKV ka ISO
Mgbe niile ntọala, ịhụchalụ DVD oru ngo na-aga "Ọkụ" taabụ, họrọ "Save ISO Image File" na kụrụ "Ọkụ" button na-amalite ike ISO si MKV faịlụ.
Na nke a ọkachamara MKV ka ISO Ntụgharị, ị ga-ahụ ya nnọọ mfe iji tọghata MKV faịlụ ka ISO image faịlụ nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ha n'ụzọ na-amasị gị.
Otu MKV faịlụ bụ a Matroska faịlụ. Matroska bụ a free na-emeghe iyi akpa format si Russia. Ọ bụ ọzọ ka na-ewu ewu AVI na MP4 formats. Ọ na-adịghị pụtara MKV format njọ karịa nke ndị na-ewu ewu video formats. MKV faịlụ nwere ọtụtụ uru:
1) akwado multiple ọdịyo egwu.
2) Multiple Ndepụta Okwu tracks.
3) Chapter nkwado dị ka DVD nkiri
4) Nkwado maka Dolby Digital 5.1 na DTS ọdịyo.
Mgbe ị na-ọkụ MKV ka ISO faịlụ, mmepụta àgwà bụ isi. Luckily, na Wondershare DVD Creator, ị nwere ike mfe bulie "High Quality", "Ọkọlọtọ Ogo" ma ọ bụ "kwesịrị ekwesị diski" iji kwekọọ gị mkpa kasị mma.